Awoowgii Oo Hortiisa Lagu Toogtay, Miinooyinkii Uu Iska Ilaalin Jiray, Noloshii Qaxoontiga Iyo Luka Modric Oo Ka Sheekeeyey Dhibaatadii Uu Kusoo Koray – Cadalool | Shabakada Wararka Ciyaaraha
HomeWararka MaantaAwoowgii Oo Hortiisa Lagu Toogtay, Miinooyinkii Uu Iska Ilaalin Jiray, Noloshii Qaxoontiga Iyo Luka Modric Oo Ka Sheekeeyey Dhibaatadii Uu Kusoo Koray
Awoowgii Oo Hortiisa Lagu Toogtay, Miinooyinkii Uu Iska Ilaalin Jiray, Noloshii Qaxoontiga Iyo Luka Modric Oo Ka Sheekeeyey Dhibaatadii Uu Kusoo Koray
14/07/2018 Abdiwahab Ahmed
Kabtanka xulka qaranka Croatia, waxa uu kusoo koray nolol silic badan iyo wakhtiyo dagaallo sababeen inuu qaxoonti ku noqdo dal kale.
Modric ayaa soo bandhigay noloshiisii carruurnimo iyo waayihii xanuunka badnaa ee uu kusoo koray.
Bishii December 1991, markii uu Modric lix jir noqday waxa gobolka Balkan ka bilaabmay dagaal, waxaanay ciidamadii Serbia weerar ku qaadeen tuulooyinka iyo magaalooyinka Croatia. Wakhtigaas, qoyaskiisa waxa soo food-saartay nolol adag iyo naftoodu halis gasho. Waxa isaga oo indhihiisu arkayaan hortiisa lagu toogtay awoowgii. Hooyadii waxay ahayd dawaarle, halka aabbihii uu ka shaqayn jiray geerash ciidamadu leeyihiin oo baabuurtooda lagu hagaajiyo. Markii ay ciidamada Seerbia joojin waayeen weerarrada, qoyska Luka Modric waxay galeen kaam qaxoonti oo ku yaalla magaalada Warsaw ee Poland si noloshoodu ugu badbaaddo.
Waraysiyo badan oo laga qaaday, waxa uu Modric ka sheekeeyey dhawaqa bambooyinka iyo rasaasta ee uu kusoo dhex-koray iyo sidii isaga iyo walaashii ay uga taxaddari jireen miinooyinka dhulka ku aasan marka ay socdaan dariiqyada.
“Dagaalku wuxuu iga dhigay qof xooggan. Ma sawiri karayo sida qoyskaygu ay muddada dheer iigu dhibaatoonayeen.” Sidaas ayuu yidhi Luka Modric oo hadda xulka dalkiisa geeyey finalka Koobka Adduunka.
Markii uu yaraa, Luka Modric waxa uu ku dayan jiray halyeygii reer Brazil ee Ronaldo, hase yeeshee waxa dhibaato ku ahayd jidhkiisa caatada ah oo uu caqabad kala kulmi jiray tababareyaasha. Waxa lagu tilmaami jiray ciyaartoy diciif ah oo ka xishoonaya jidhkiisa, isla markaana aan faa’iido ka keeni karin kubadda cagta, laakiin Luka waxa uu aaminsanaa in lugihiisa uu ku gaadhi doono guul.
Sannadkii 2008, waxa uu ku biiray kooxda horyaalka Premier League ee Tottenham oo uu u horseeday inay kasoo qayb-galaan Champions League oo ay gaadhaan wareegga siddeed dhamaadka xili ciyaareedkii 2010-11. Kadddib waxa uu u wareegay kooxda taariikhda weyn ee Real Madrid, halkaas oo ay ku bilaabantay noloshiisa cusub ee ah in loo aqoonsado hormoodka khadka dhexe ee kubadda cagta wakhtigan.
Shacabka dalka Croatia oo ay tiradoodu tahay 4.2 milyan ayaa uu hadda doonayaa inuu kaga farxiyo koobka dunida ugu qaalisan ee Adduunka marka ay Axadda iska hor yimaaddaan France, haddii uu ku guuleystana waxay u noqon doontaa farxaddiisii ugu weynayd.